RW Khayrre ma qaatay talo uu 3 bilood kahor siiyey siyaasiga CCW, maxay se ahayd? | Hadalsame Media
DHEGEYSO: Booliiska Stockhholm oo heegan sare la geliyey kaddib weerarkii Faransiiska
DHEGEYSO: ”Waa idinku daba lunnay!” – Gobollada Sweden oo ka cabanaya…
Maraykanka oo Israel siinaya bambo uusan abidkii dagaal u adeegsan oo…
”Ilmahayga u sheega in aan jeclahay!” – Dardaaranka haweenay iyada oo…
Home Maqaallada RW Khayrre ma qaatay talo uu 3 bilood kahor siiyey siyaasiga CCW,...
RW Khayrre ma qaatay talo uu 3 bilood kahor siiyey siyaasiga CCW, maxay se ahayd?
(Hadalsame) 25 Luulyo 2020 – Waxaa maanta dhacay wax u eg af-gembi lagu ridey Xukuumaddii RW Xasan Cali Khayrre.
Kulan buuq hareeyey oo lagu qabtay Baarlamanka ayaa lagu sheegay inay 170 xildhibaan ka codeeyeey RW Khayrre iyo xukuumaddiisa oo ay sidaa darteed dhacday XFS.
Waxaa in yar kaddib soo baxay War Saxaafadeed u muuqda mid sii diyaarsanaa oo kasoo baxay Xafiiska MW Farmaajo, kaasoo lagu soo dhoweeyey go’aanka Baarlamanka, isla markaana lagu sheegayo in uu Madaxwaynuhu deg deg usoo magacaabayo RW cusub oo soo dhisa xukuumad cusub, taasoo ku dhisan xeeshii tillaabadanba loo qaaday oo ah muddo kororsi dheer.
Haddaba, waxaa horay RW Khayrre ula taliyey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo 20-kii Abriil u sheegay inuu si cad ugu istaago xil-wareejinta xilliga kala guurka ah, balse tiiyoo uu Khayrre arrintaa ugu yaraan 2 jeer ka dhawaajiyey, misna markii la tegey Shirkii Dhuusamareeb ma uusan muujinin moowqif ka badan inuu wax isu jiid jiido.
Previous articleDEG DEG: MW Farmaajo oo sheegay inuu dhaqse usoo magacaabayo RW cusub
Next articleMaxaa la gudboon RW Khayrre? Maxay se tahay tillaabada ugu WANAAGSAN ee uu qaadi karo?
”Wejigiis ha gubto qashinkaan!” – Khabiib oo weerar cusub ku qaaday MW Faransiiska
DHEGEYSO: ”Waa idinku daba lunnay!” – Gobollada Sweden oo ka cabanaya talo kasoo baxday hay’ad ka tirsan Dowladda Dhexe
hadalsame - October 30, 2020
(Moscow) 30 Okt 2020 - Feeryahanka miisaanka fudud ee Ruushka ee Khabib Nurmagomedov ayaa si xun ugu xanaaqey MW Faransiika ee Emmanuel Macron oo...
Maraykanka oo Israel siinaya bambo uusan abidkii dagaal u adeegsan oo burburin karta dhufaysyada aasan oo dayuurad gaar ah laga rido (Wax ka baro)
”Ilmahayga u sheega in aan jeclahay!” – Dardaaranka haweenay iyada oo si xun u dhaawacay bannaanka uga carartay weerarkii kaniisadda + Sawirro